Archive du 20180312
Manelingelina Ravalomanana Miala any ny tetika maloto hamelezana azy
Mivoaka ny tsiambaratelo ! Loharanom-baovao iray no nahalalana fa kotrehana ny famelezana am-pitaka an’i Marc Ravalomanana amin’ny alalan’ny fanetsehana ny raharaham-pitsarana mikasika ny 07 febroary 2009.
Claudine Razaimamonjy Manana 10 tapitrisa dolara hatontona amin’ny fifidianana …
Tsy manao vazaha mody miady intsony fa efa misy ny lonilony eo amin’ny samy HVM, ary toa nailika sy tsy raharahiana intsony i Claudine Razaimamonjy sy ny ekipany.
Fitondrana HVM Hahita raharaha amin’ny mpiasam-panjakana
Nanamafy ny fitarainany ho kely karama sy ratsy karakara indrindra eto Madagasikara tamin’ny alalan’ny randrambaon’ny sendikan’ny mpiasa na ny SSM, tetsy Antaninarenina, ireo mpiasam-panjakana ny fiafaran’ny taona 2017.
Pastera Mailhol “Mino aho fa tsy maintsy ho lasa filoha”
Mino sy mahatoky Atoa Christian Dieu Donné fantatry ny maro amin’ny anarana hoe : pastera Mailhol fa izy no hitantana ny firenena Malagasy amin’ny taona ho avy.
DHD Madagasikara Handrotsaka kandidà ho filoham-pirenena
Ny sabotsy lasa teo, nivoaka tamin`ny fahanginany ny antoko DHD Madagasikara ka nanolotra ny vinany izay mitodika kokoa amin`ny sosialim-bahoaka.
Fiaraha-miasan’ny CNaPS sy FLM Miditra amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra
Fanoitra iray entina mampandroso sy manodina ny orinasa ny fahaiza-mitarika ka nahatonga ireo mpianatra eo anivon’ny Sekolin’ny Fambolena sy ny Fiompiana(SEFAFI) tany Tombotsoa Antsirabe nangataka fampianarana sy fizarana traikefa avy amin’ny tale jeneralin’ny CNaPS
Fitambaran’ny zanak’Antemoro Mitaky ny hanokafana ny seranan-tsambon’i Manakara
Notsofin-drano ny faran’ny herinandro teo ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny biraon’ny fitambaran’ny zanak’Antemoro na ny FIANTA, hiasa mandritra ny efa-taona.
Fitsidihana ny zaridainan’Anosy Mety ho olana ny fandoavam-bola
Mbola miandry ilay orinasa tsy miankina hahazo ny tolo-bidy hitantana azy vao hisokatra tanteraka ho azon’ny daholobe hidirana ilay zaridaina vaovao etsy Anosy, raha araka ny loharanom-baovao.
08 martsa tany Andina -Ambositra Nasongadina tamin’ny alalan’ny fitsaboana nify
Niavaka ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny vehivavy tany amin’ny kaominina ambanivohitra Andina, distrikan’Ambositra ny alakamisy lasa teo.
Fileovana rugby 3FAI Ambalavao Isotry Hankalaza ny faha-35 taonany
Hankalaza ny faha-35 taona niorenany ny fileovana rugby 3FAI Ambalavao Isotry tantanan-dRtoa Rakotoniriana Raissa ka namory fanindroany an’ireo fileovana nasainy amin’ny lalao rugby enti-manamarika ny tsingerin-taonany ny sabotsy 10 martsa 2018 tetsy Tsaralalàna misy ny foibeny.
K2HB sy ny rafitra baolina kitra Malagasy Mangataka ny hanaovana fifidianana amin’ny 2020
Niteraka olana teo amin’ny baolina kitra ny fifidianana tao anatin’ny 16 taona ary nampiraviravy tanana ny maro izay mpanohana ny klioba, ny mpanazatra sy mpilalao …,
Kaominina Antanimbary-Betsiboka Namoaka volamena 1600 taonina tamin’ny 2017
Anisan’ny faritra tena manankarena harena ankibon’ny tany ny faritra Betsiboka amin’ny ilany andrefan’ny nosy iny, indrindra fa ny volamena. Eo koa ny vato sarobidy maro samihafa tahaka ny Topaze, Beryllium, Titane, Améthyste ...
Mpandraharaha Malagasy Tofoka amin’ny tsy fandraisan’andraikitry ny mpitondra
Leo tanteraka amin’ny tsy fahaiza-manao sy ny tsy fandraisan’andraikitry ny fitondrana ny mpandraharaha. Maro ny efa zavatra nangatahan’izy ireo nandritra ny fotoana lava saingy tahaka ny miteny amin’ny rivotra ihany ary tsy misy valiny mahafa-po.
Sehatra iraisam-pirenana Tsy resy lahatra hamatsy vola intsony
Votsotra ny famatsiam-bola maro noho ny afitsok’ity fitondrana ity. Tsy resy lahatra amin’ny fomba fitantanana mihitsy ny sehatra iraisam-pirenena.
Tranopirintim-pirenena Malagasy Voaarina amin’ny ampahany
Vita amin’ny ampahany betsaka ny fanarenana ny Tranopirintim-pirenena.
Raharaha hala-jaza tany Toamasina Tsy mitovy hevitra indray ny polisy sy ny fitsarana
“Tsy heloka velively ny fanomanana tsy mbola tontosa amin’ny hala-jaza, tsy misy ray aman-dreny nametraka fitoriana ihany koa tamin’izy ireo na tamin’ny polisy milaza ny fahaverezan-janany,
Diso tanteraka ny fitondram-panjakana tsy nametraka ny andinin-dalàna momba ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana ao anatin’ilay volavolan-dalana fehizoro momba ny fifidianana, hoy ny kmf cnoe.
Fandovana an’i Johnny Halliday Hamoaka porofo tsy azo lavina i Laeticia
Hiakatra fitsarana ao Nanterre – Paris ny alakamisy 15 martsa izao ny raharaha fandovana an’i Jhonny halliday, hifanolanan’i Laeticia vadiny sy ireo zanak’i Johnny mianadahy Laura sy David.